Somaaliya waxay u baahan tahay koronto si ay u horumarto | Hadalsame Media
Home Maqaallada Somaaliya waxay u baahan tahay koronto si ay u horumarto
(Hadalsame) 03 Juun 2020 – Soomaalidu nolol kama samenkarto ilo tamereedyada kala ah dabeysha, qoraxda iyo xaabada balse waxey u baahanyihiin ilo tamaredyo caadi ah (conventional energy).
Koronta la aan awgeed dadka Soomaalidaa waxey shitaan xaabada, xididada geedaha, dhuxusha iyo saalada lo’ada oo la qalajiyay si ay raashin u karsadaan sidookale u qaaqamaan si ay kuleyl uga helaan. Waxyaabaha ka dhasha waxaa ka-mid-ah carbon monoxide iyo budo ama xash madow.
Kuma haboona in koronto joogta ah goorkastana la helikaro laga dhaliyo ilo-tamareedyadan kala ah biyaha, dabeysha, qoraxda iyo bioenergy (bioenergy = tamar laga dhaliyo geedaha, miraha, qashinka sida saalada lo’da, dufanka xoolaha). Xiliyo kooban ayaa la’helaa dabeysha sidoo kale xiliyo waxaa jira shucaaca qoraxdu uu san sidii la rabay kusoo gaareyn caadka oo badan awgeed. Waxey ubaahantahay beero waaweyn in la abuuro dhir loogu talagalay in laga dhaliyo tamarta (bioenergy) loo baahanyahay.
Marka la gubo ilo-tamareedyadan waxaa ka dhasha gaas ”carbon dioxide” kaasoo lagama maarmaan u ah nolosha dhirta iyo dalagyada. Sida la ogyahay carbon dioxide (CO2) ma aha sun, taas badelkeeda waa nafaqo muhiim u’ah nolosha dhirta, sidoo-kale waxuu siiyaa hawada nagu xeeran (atmosphere), iydoo loo maraayo photosyntesis-ka, oksijiin nolosha lagama maarmaan u ah.
Waxaa Qoray: Inj. Abdulkadir Jilibeey
Previous articleShiinaha & Iiraan oo munaafaqnimo ku eedeeyey Maraykanka & xulufadiisa reer Galbeedka
Next articleNin Soomaali ah oo ay Booliiska Otawa u dileen sida Floyd oo dacwaddiisa la furayo (Arag inta meelood ee ay labada shil iskaga eg yihiin)